काे-राेनाको खोप लगाएका व्यक्तिको मृ-त्यु, खोपकै कारण मृ-त्यु भएको पुष्टी ! – List Khabar
Home / समाचार / काे-राेनाको खोप लगाएका व्यक्तिको मृ-त्यु, खोपकै कारण मृ-त्यु भएको पुष्टी !
काे-राेनाको खोप लगाएका व्यक्तिको मृ-त्यु, खोपकै कारण मृ-त्यु भएको पुष्टी !
admin December 22, 2021 समाचार Leaveacomment 77 Views
न्युजिल्यान्डमा को-“भिड विरुद्ध फाइजरको खोप लगाएपछि एक व्यक्तिको मृ- त्यु भएको छ । खोपपछि उनलाई ह्र’* दयघा* ’त भएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । २६ वर्षीय रोयी जेम्स नरिनको मृ- त्यु भएको हो । पहिलो डोज लगाएको दुई साता नबित्दै उनको मृ- त्यु भएको हो ।
उनलाई खोपपछि ह्र’* दयघा* ’त भएको प्रारम्भिक परीक्षणमा देखिएकाे जनाइएको छ । खोपकै कारण उनको मृ- त्यु भएको न्युजिल्यान्डको खोप अनुगमन बोर्डले जनाएको छ । खोप लगाएपछि उनी त्र* सित देखिएका थिए । यसअघि अगस्टमा पनि फाइजर खोप लगाएकी एक महिलाको मृ-“त्यु भएको थियो ।
याे पनि, ओ-मिक्रोन काे कारण सन् २०२२ मा स्वास्थ्य सङ्कट आउने ईयूको यस्ताे चेतावनी ! युरोपेली सङ्घ (ईयू) को स्वास्थ्य निकायले सन् २०२२ को सुरु सम्ममा स्वास्थ्य सङ्कट आउने चे-तावनी दिएको छ । ईयूले को- रोना भाइरसको नयाँ भेरियन्ट ‘ओ-मिक्रोन’ का कारण स्वास्थ्य सङ्कट आउने चे-तावनी दिएको हो ।
यो भेरियन्टका कारण युरोपमा अस्पताल भर्ना र मृ- त्युको सङ्ख्या बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । ‘युरोपियन सेन्टर फर डिजिज प्रिभेन्सन एन्ड कन्ट्रोल’ले भौतिक दूरी, मास्क र बुस्टर खोप कार्यक्रममा जोड दिन सबै सदस्य राष्ट्रहरूलाई आग्रह गरेको समाचार संस्था एएफपीले जनाएको छ ।
महामारी अगाडि नै देशहरुलाई आफ्नो क्षमता बढाउन र आवश्यक सावधानी अपनाउन साथै महामारी नियन्त्रणका लागि आवश्यक प्रयास थाल्न ढिला गर्न नहुनेमा युरोपेली आयोग प्रमुख उर्जुला भोन देर लायनले जोड दिनुभएको छ ।
Previous २ युवतीले बोलाएर ए’कान्तमा भेट्न गएका युवकको मृत्यु, पछि पो थाहा भयो युवतीहरुले त….
Next are you varjn ? पत्रकार को प्रश्न? जोतिले यस्तो दिईन् उत्तर…